Ulengiselwe isigwebo umama waseMpumalanga ngokushaya usana lwakhe | News24
Ulengiselwe isigwebo umama waseMpumalanga ngokushaya usana lwakhe
Mbombela - INkantolo yesiFuunda yaseNelspruit igwebe umama osemncane iminyaka emine ebhadle ejele ngokushaya ngesicathulo ingane yakhe yomfana enezinyanga ezingu-18 izelwe.
IMantshi uVanessa Joubert ekhipha isigwebo ngoLwesithathu ulengisele lo mama oneminyaka engu-21 ubudala isigwebo sakhe iminyaka emihlanu wathi kufanele aqhubeke nokululekwa ngokwenqondo esibhedlea iRob Ferreira.
Ubebhekene neminyaka eyishumi ejele njengomuntu oqalayo ukutholakala enecala ngokushaya ngenhloso yokulimaza ingane, kusho uJoubert.
OLUNYE UDABA: Uyavela osolwa ngokubulala usana lwakhe
Igama lalo wesifazane waseTekwane South eduzane naseMbombela eMpumalanga angeke lidalulwe njengoba kuvikelwa ingane. Usasesikoleni wenza uGrade 10 kanti futhi unenye ingane eneminyaka emibili. Waboshwa ngomhlaka-21 Meyi 2016 ngesikhathi ugogo wengane emuvulela icala emaphoyiseni.
Ulivumile icala lokushaya ngoLwesithathu.
"Ngiyaxolisa ngengakwenza enganeni yami. Ngangithukuthelele uyise wayo kanti futhi ngiyazisola. Ngiyayithanda ingane yami, ngicela uxolo, angeke ngiphinde mngilimaze ingane yami," kusho lo mama esitatimendeni.
UJoubert uthe inkantolo yenelisekile ngokuthi ulivumile icala waphinde watshengisa nokuzisola.
Imantshi iphinde yathi akayeke ukukhiphela isibhongo sakhe enganeni wathi izingane kufanele zikhuliswe ngendlela ekahle, enothando futhi zikhuliswe emndenini enobumbano.
UJoubert ujatshuliswe wukuthi umsolwa nobaba wengane sebebuyisene nokuthi uyise useyayondla ingane.